Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho ku soo laabtay – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii uu magaalada Addis Ababa kaga qeyb galay xuska 40 guuradii ka soo wareegtey markii ururka Tigray People’s Liberation Front (TPLF) uu bilaabey dhaqdhaqaaqii milateri ee isbeddel doonka ahaa, ee uu talada dalka kaga tuuray Madaxweynihii dalkaas Mingistu Hailemariam.
Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa garoonka diyaaraha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay Guddoomiyaha Baarlamanka Maxamed Cusmaan Jawaari, Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka Maxamed Cumar Carte , xubno ka tirsan golaha wasiirada , baarlamanka iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn kala qeybgaley munaasabad lagu dhagax dhigayey mashruuc khad tareen oo cusub oo Shiinaha uu ka dhisayo Itoobiya.
Mashruucan ayaa isku xiri doona degaannada Mekelle, Weldiya iyo Hara Gebeya, waxaana uu Madaxweynaha ku tilmaamay dhismaha mashruucan inuu ka turjumayo muhimadda nabadgelyada iyo wadajirka ummadeed, Soomaaliyana ay wax badan ka baran karto Itoobiya.
“Mashruucan horumarineed iyo kuwo ka sii wanaagsanba waa laga hirgelin karaa dalkeena, Ilaahay waxaa uu shacabkeena Soomaaliyeed ku maneystey hal abuur dhanka ganacsiga oo si weyn na loogu ammaano, haddii aan hibadaas iyo dadaal xilkasnimo ah ku darno waxaan shaki ku jirin inaan Afrika iyo caalamkaba tusaale u noqon doono” ayuu yiri Madaxweynaha.
Mashruucan waxaa fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo magaceeda la yiraahdo China Communication Construction Company (CCCC), waxaana shirkaddan labaatankii sanno ee la soo dhaafay ay gacan weyn ka geysaneysey hirgelinta mashaariic badan oo kaabeyaasha dhaqaalaha ah oo laga wado dalalka Afrika.
Dab xoog leh oo saaka baabi’iyay qeybo ka mid ah suuqa Gikomba ee magaalada tan Nairobi.
Dhageyso: Shirka Madaxda Afrika oo ka Furmay Johannesburg